Life Style Archives - YATHAZONE
ကျွန်တော်သိသော မိန်းကလေးများ 1️⃣- တည်ငြိမ်တဲ့ မိန်းကလေး ဟန်ဆောင်မှုကို ကျွမ်းကျင်တယ် ခံစားချက်ကို လိုအပ်သလို အပြုံးနဲ့ဖုံးတတ်တယ်။ 🔴 အားနည်းချက် 🔴 အရောင်တွေများအောင်လေ့ကျင့်ထားတော့ ကလေးဆန်တဲ့ သွက်လက် ချစ်စရာကောင်းမှုမျိုးသူ့မှာမရှိဘူး။ 2️⃣- ကလေးဆန်တဲ့ မိန်းကလေး ဘဝဟာပေါ့ပေါ့ပါးပါး စက္ကူပါးလေးတရွက်ပဲ လွပ်လပ်တဲ့အပြုံးလေးကြောင့် အမြဲချစ်စရာကောင်းနေတယ်။ 🔴 အားနည်းချက် 🔴 ရည်မှန်းချက်တွေပျောက်ပြီး ကိစ္စတိုင်းကို စိတ်ပျက်သွားလောက်အောင် စိတ်ကောက်တတ်ကြတယ် နားလည်မှုပေးနိူင်မှုစွမ်းအား သူတို့မှာမရှိဘူး။ 3️⃣- လက်တွေ့ဆန်တဲ့ မိန်းကလေး ဥာဏ်ကောင်းတယ် တော်တယ် တတ်တယ် ဘဝအတွက် အစီအစဉ်ကောင်းတွေကို ရေးဆွဲထားပြီးသား ထိုသူမျိုးနဲ့အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ရင် တိုးတက်အောင်မြင်မှာကျိန်းသေတယ်။ 🔴 အားနည်းချက် 🔴 စိတ်ကူးယဉ်နိူင်စွမ်းနည်းပါတယ် လက်တွေ့မကျတဲ့ ကိစ္စတချို့ဟာ …
အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသမီးတွေ ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် နုပျိုနေရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၇) ချက် နိုင်ငံတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလှအပ နည်းလမ်းတွေ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ရှိကြပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသမီးတွေဆိုရင် အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ် ရှိရင်တောင် အသက် ၃၅ နှစ်လို့ ထင်ရလောက်အောင် နုပျိုကြပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသမီးတွေရဲ့ နုပျိုရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို love media ကနေ ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်နော်။ ၁။ ဆန်မှုန့်ကို အသုံးပြုခြင်း အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးတွေက ဆန်မှု့န်ကို ရေနဲ့ဖျော်ပြီး ရလာတဲ့အနှစ်ကို mask အဖြစ် ကပ်ရုံမကပါဘူး။ ဆန်မှုန့်ကို body scrub အဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ တစ်ခါတရံ ဆန်မှုန့်ထဲကို သစ်ကြံပိုးမှုန့်၊ …
ကော်ဖီမှုန့်စစ်စစ်နဲ့ SKIN CARE နည်း (၄) မျိူး
ကော်ဖီမှုန့်စစ်စစ်နဲ့ SKIN CARE နည်း (၄) မျိူး ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပျိူမေတို့ အသားအရည်ထိန်းသိမ်းရာမှာ အသုံးဝင်လှတဲ့ ကော်ဖီမှုန့်စစ်စစ်နဲ့ Skin Care လို့ရတဲ့ နည်းလေးမျှဝေပေးပါမယ်။ ၁။ အဆီပြင် – ပေါင်၊ ဝမ်းဗိုက်မှာရှိတဲ့ အဆီပြင်တွေ၊ အသားအရေမညီညာမှုတွေ မရှိဖို့ ရေချိုးခါနီးတိုင်း ကော်ဖီမှုန့်နဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ၂။ မျက်အိတ်ဖောင်းခြင်း – ကော်ဖီမှုန့်နဲ့ မျက်အိတ်ဖောင်းနေတဲ့နေရာလေးတွေကို သိပ်ပြီးခဏလောက်ထားပေးခြင်းဖြင့် သက်သာစေမှာပါ။ ၃။ ဆံပင် – ကော်ဖီစစ်စစ်မှုန့်နဲ့ နှပ်ထားတဲ့အရည်နဲ့ ခေါင်းလျှော်ပေးခြင်းဖြင့် ဆံပင်တွေကို မည်းနက်တောက်ပြောင်စေမှာပါ။ ၄။ အသားအရေ – ကော်ဖီမှုန့်၊ သကြားနဲ့ အုန်းဆီတို့ကို အချိုးကျရောပြီး ရေချိုးတိုင်း …
ဘာကြောင့်များ ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေစကားကို နားမဝင်သလဲ?
ဘာကြောင့်များ ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေစကားကို နားမဝင်သလဲ? ၁။ မိန်းမတွေက စကားများလွန်းတယ် သိပ်ကို အခြေခံကျတဲ့ အချက်က မိန်းမရဲ့ စကားများလွန်းတဲ့ အခြေခံဗီဇပါပဲ။ “ကျောပူတာပဲ ခံနိုင်မယ်။ နားပူတာတော့ မခံနိုင်ဖူး” ဆိုတဲ့ ယောက်ျားတို့ရဲ့ ဝသီအတိုင်း သိပ်ကိုများလွန်းတဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ စကားလုံးတွေဟာ ယောက်ျားတွေကို နားလျှံသွားစေတာ မဆန်းပါဘူး။ ၂။ ယောက်ျားတွေက သိပြီးသားလို့ ယူဆတယ် မိန်းမဘက်က အချစ်ရေးအကြောင်း ပြောမလား? အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း ပြောမလား? နားလည်မှု? ခွင့်လွှတ်မှုနဲ့ သစ္စာတရား? ယောက်ျားအားလုံးနီးပါးက ဒါတွေ သူတို့နားလည်ပြီးသားလို့ ယူဆကြပါတယ်။ သင်ပြောလည်း အပိုလို့ယူဆနေတတ်ပါတယ်။ ၃။ မိန်းမတို့ရဲ့ ဗြစ်တောက်ဗြစ်တောက် မိန်းမတွေဟာ အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကို တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ …
အမြဲရယ်နေတတ်တဲ့သူတွေ၊ စကားများတဲ့သူတွေဟာ အထီးကျန်ဆန်လွန်းတဲ့သူတွေပါတဲ့နော်
အမြဲရယ်နေတတ်တဲ့သူတွေ၊ စကားများတဲ့သူတွေဟာ အထီးကျန်ဆန်လွန်းတဲ့သူတွေပါတဲ့နော် သင့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင်က အမြဲတမ်း ရယ်မောနေတတ်တဲ့သူတွေလား။ ဒါဆိုရင်တော့ အမြဲတမ်းရယ်နေတတ်တဲ့သူတွေ၊ စကားများတဲ့သူတွေဟာ အထီးကျန်လွန်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေပါတယ်..။ ဒါကြောင့် အမြဲတမ်းရယ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ စကားအရမ်းများတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် သူများတွေထက်ပိုပြီး ဖေးမဖို့လိုတယ်ဆိုတာ သတိရပါနော်.. (၁) စကားပြောဖော်မရှိဘူး.. အမြဲတမ်းရယ်မောနေတတ်တဲ့သူတွေ၊ စကားများတဲ့သူတွေဟာ လက်တွေ့ဘဝမှာ စကားပြောဖော်မရှိလောက်အောင်ကို အထီးကျန်ဆန်တဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ဘဝမှာ အမြဲတမ်းတစ်ယောက်တည်းပဲ ဖြစ်နေလေ့ရှိပြီး သူငယ်ချင်းဆိုတာတောင် ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ..။ ဒါကြောင့်ပဲ သူများနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ အထီးကျန်တာကို ခဏလောက်မေ့ချင်လွန်းလို့ ရယ်မောပြီး စကားတွေအများကြီးပြောနေရတာဖြစ်ပါတယ်..။ (၂) မွန်းကျပ်တယ်.. သူတို့စိတ်ထဲမှာ မွန်းကျပ်မှုတွေ အရမ်းများကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေ၊ ရင်ထဲရှိတဲ့အရာတွေကို ပြောစရာလူမရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် တမင်တကာ ရယ်နေတာလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်..။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတလေ …
သံလွင်ဆီကို အသုံးပြုပြီး ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ Glow Skin ဖြစ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ
သံလွင်ဆီကို အသုံးပြုပြီး ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ Glow Skin ဖြစ်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ သံလွင်ဆီဟာ အလှအပအတွက် သာမက ကျန်းမာရေး အတွက်ပါ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ ဆေးကောင်း တစ်လက် ဖြစ်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီ ဟာဆိုရင် အသားအရေကို စိုပြည် လှပစေပြီး အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်တွေကို အသစ်အသစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေ နိုင်တာကြောင့် အသားအရေကို အထူး လှပစေပါတယ်။ ခု ဖော်ပြပေးမှာ ကတော့ သံလွင်ဆီကို သုံးပြီး အသားအရေကို ကြည်လင် တောက်ပစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ( ၁ ) သံလွင်ဆီနဲ့ သံပုယိုရည် သံလွင်ဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ …
Total views : 689094